Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka BlackBerry in Samsung
Just dib siiyey telefoonka aad BlackBerry si T-Mobile iyo hadda u baddashaan Samsung? Sidee ku saabsan suuqa kala iibsiga xiriir ah? Ma u adag? Haddii aadan baxay tirada xal kasta ah, halkan joojiyo. In this article, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso sida loo wareejiyo xiriirada ka BB in Samsung via ah qalab dhinac saddexaad oo awood leh iyo Bluetooth.
Xalka 1: Saxiixa xiriirada BlackBerry in Samsung la qalab
Xalka 2; nuqul xiriirada BlackBerry in Samsung via Bluetooth
Blackberry in Transfer Contact Samsung
Ceshano xiriirada, SMS iyo Guda call ka gurmad ah file BlackBerry iyo wareejiyo phone Samsung.
Bedelka oo dhan xiriirada ka BlackBerry in phone Samsung.
Guda wac Copy oo SMS ka BlackBerry in Samsung oo aan ka kaaftoomi kasta.
Taageer badan oo qalab Samsung, sida Samsung Galaxy S4, S3, Ogow 3, Fiiro 2, Ogow, S2, S iyo in ka badan .
Si fiican u shaqeeyaan files raad raac ah oo telefoonada socda BlackBerry OS 7.1 iyo wixii ka danbeeyay.
Sidee si ay u gudbiyaan BlackBerry Xiriirada in Samsung la qalab
Tallaabada 1. U hubso in aad telefoon BlackBerry file gurmad
Si aad u isticmaasho Wondershare MobileTrans ah, waa in aad file gurmad BlackBerry sameeyo Desktop BlackBerry® ee Software. Haddii aad ka dhigteen, oo kaliya u dhaqaaqo talaabo 2. Haddii aadan, raac tuduca soo socda si ay gurmad telefoonka aad BlackBerry.
Orod BlackBerry® Desktop Software on your computer. In uu furmo suuqa hoose, guji Back ilaa hadda in ay gurmad aad xiriirada BlackBerry ama in ka badan in ay kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Isku qalab Samsung in kombiyuutarka
Markaas, ordo kala iibsiga qalabka BlackBerry in Samsung kombiyuutarka. In uu furmo suuqa hoose, guji Soo Celinta si ay u muujiyaan BlackBerry in ay Samsung furmo suuqa kala iibsiga. Markaas, aad u hesho qalab Samsung ku xiran via cable USB ah. Marka la aqoonsan yahay, qalab Samsung muujinaysaa ilaa on xaq.
Tallaabada 3. xiriirada ka dhaqaaq BlackBerry in Samsung
On column ka tegey, guji saddexagalka rogay inay soo qaadaan menu hoos-hoos. Dooro file gurmad BlackBerry. Dhammaan files gurmad aad sameeyay ka muuqan. Dooro mid ka mid doonayay oo xiriir ah, abuse call oo SMS in file gurmad ah waxaa lagu muujiyey dhexe.
Si aad u dhaqaaqo xiriirada BlackBerry in Samsung, idinku waajibka ah inaad uncheck Guda call oo SMS. Markaas, riix Start Copy .
Raac tutorial fudud
Tallaabada 1. telefoonka aad Blackberry, u tag Options . Hoos si aad u hesho ka Networks iyo Connections . Waxaa Riix oo markaas dooran Bluetooth Connections .
Tallaabada 2. screen Bluetooth ee telefoonka aad Blackberry, shid Bluetooth. On qalab Samsung, ka jaftaa Settings > shid Bluetooth aad.
Tallaabada 3. Tag screen Bluetooth ee telefoonka aad Blackberry, guji Add Device New > Search . Markaas, Bluetooth ku saabsan BlackBerry baadhi doonaa qalab kasta oo Bluetooth waxaa gagadin.
Tallaabada 4. Marka natiijada baaritaanka ayaa lagu muujiyay, guji magacaaga qalab Samsung. Markaas, xaqiijin passkeys ku saabsan BlackBerry iyo qalab Samsung waa isku mid oo guji Haa . On qalab Samsung, guji aqbal .
Tallaabada 5. Riix telefoonka Samsung telefoonka Blackberry oo diaplg ah soo baxa. Dooro Transfer Xiriirada . Hanaanka wareejinta ayaa ka bilaabma. Fadlan ha in uu baajiyo inta ay socoto oo dhan. Riix OK
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada iyo More ka BlackBerry in Android?
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada iyo SMS ka BlackBerry si iPhone?
Sida loo bood Ship ka Samsung si iPhone?
Sidee si ay u gudbiyaan Content ka iPhone in Samsung?
Sidee si ay u haajiraan Xogta laga Nokia in Samsung?
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka HTC in Samsung?
Sidee si ay u gudbiyaan Content ka iPad in Samsung?
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Android inay Android Si fudud
Players FLV Best u Android
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ku Samsung Galaxy
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka BlackBerry in Samsung S4 / S3 / Note 3 / Fiiro 2